थ्रेड रोलिंग मेशिनको हाइड्रोलिक तेल कसरी बदल्ने र स्थापना गर्ने? - Somose
थ्रेड रोलिंग मेशिनको हाइड्रोलिक तेल कसरी बदल्ने र स्थापना गर्ने?
Thread थ्रेड रोलि machine मेसिनको बारेमा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको दबाव स्थिर छ भन्ने सुनिश्चित गर्नु हो, र प्रेशरलाई सुनिश्चित गर्न पहिलो अवस्था हाइड्रोलिक तेलको गुणस्तर हो। हाइड्रोलिक तेल भर्खरै प्रतिस्थापित गरिएको छ धेरै प्रयोगकर्ताले दबाव परिवर्तन अनुभव, र चाँडै पूरा हुनेछैन। मौसमको कारण तेलको तापमानमा भएको वृद्धिलाई हटाउन तपाईंले हाइड्रोलिक तेलको गुणस्तर जाँच गर्न ध्यान दिनु पर्छ। केही प्रयोगकर्ताहरूले रिपोर्ट गरे कि उनीहरू भर्खर हाइड्रोलिक तेल परिवर्तन गरेका छन्। वास्तवमा यहाँ एक गलतफहमी छ। सबैभन्दा पहिले, तपाईंले तेल परिवर्तन गर्नुभयो तर तपाईं हाइड्रोलिक तेलको लागि योग्य हुनुहुन्न। दोस्रो, के तपाइँ सही तरीका परिवर्तन गर्न को लागी छ?
सीएनसी थ्रेड रोलिंग मशीन स्वचालित रोलिंग मेशिन
Replacement सहि प्रतिस्थापन विधिले लामो तेल निकाल्नु पर्छ, मैन्युअल्ली सोल्नोइड वाल्भलाई भल्भ कोरमा फिर्ता फिर्ता लिनुपर्दछ, र तेललाई पाइपलाइनमा इन्धन ट्या tank्कमा फर्काउनु पर्छ। पानी सुकेपछि, पुरानो तेल हटाउनको लागि सफा रागले ईन्धन ट्या tank्कीको भित्री भित्ता मेटाउनुहोस्। प्रेसिपेटेड तेल स्लग ईन्धन ट्या tank्कमा सफापन सुनिश्चित गर्दछ। रिटर्न तेल फिल्टररेशन प्रणालीको साथ मोडलहरूको लागि, तेल फिर्ती फिल्टर पनि हटाउनुपर्नेछ र सफा गर्नुपर्छ।
√ पुरानो तेल हटाउने पूर्ण रूपले नयाँ तेलको साथ मिसिएको छैन, यसले चाँडै नयाँ तेल प्रदूषित गर्दछ र हाइड्रोलिक तेलको प्रदर्शन कम गर्दछ। अयोग्य हाइड्रोलिक तेलको दीर्घकालीन उपयोगले सोलेनोइड वाल्भ र हाइड्रोलिक तेल पम्पहरूलाई अपूरणीय क्षति पनि पुर्‍याउँछ। थ्रेड रोलिंग मेशिन प्रयोग गर्दा सावधान हुनुहोस् अनावश्यक नोक्सानबाट बच्न।
Used थ्रेड रोलि machine मेसिनको राम्रो प्रयोग गर्न प्रयोग गर्नका लागि, स्थापना गर्दा धेरै पक्षहरू सावधान हुनुपर्दछ। त्यसोभए तपाईंले केमा ध्यान दिन आवश्यक छ?
१. रोलिंग मेसिनको महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको दबाव स्थिर छ भन्ने सुनिश्चित गर्नु हो, र प्रेशरलाई सुनिश्चित गर्न पहिलो शर्त हाइड्रोलिक तेलको गुणस्तर हो। हाइड्रोलिक तेल भर्खरै प्रतिस्थापित गरिएको छ धेरै प्रयोगकर्ताले दबाव परिवर्तन अनुभव गरे, र दबाव आवश्यकताहरू पूरा गर्न सक्षम हुनेछैन। मौसमको कारण तेलको तापमानमा भएको वृद्धिलाई हटाउन तपाईंले हाइड्रोलिक तेलको गुणस्तर जाँच गर्न ध्यान दिनु पर्छ। केही प्रयोगकर्ताहरूले रिपोर्ट गरे कि उनीहरू भर्खर हाइड्रोलिक तेल परिवर्तन गरेका छन्। वास्तवमा यहाँ एक गलतफहमी छ। सबैभन्दा पहिले, तपाईंले तेल परिवर्तन गर्नुभयो तर तपाईं हाइड्रोलिक तेलको लागि योग्य हुनुहुन्न। दोस्रो, के तपाइँ परिवर्तन गर्नका लागि सहि विधि छ?
२. बिजुली बक्स उपकरण खोल्नुहोस् र ध्यानपूर्वक जाँच गर्नुहोस् कि भित्रका सबै टर्मिनलहरू खाली छन। यदि तपाईंले समस्या पाउनुभयो भने, तिनीहरूलाई तुरुन्त कडा पार्नुहोस्। हाइड्रोलिक थ्रेड रोलिंग मेशिन आपूर्तिकर्ताले तपाईंलाई याद दिलाउँछ कि तारहरू पूरा भएको छ र यो टुक्रिएको छालाको कुनै समस्या हुँदैन भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्न तपाईंले तारको स्थिति जाँच गर्नु पर्छ। जब समस्याहरू फेला पर्दछ, तिनीहरू समयमै प्रतिस्थापन गर्नुपर्दछ।
The. पावर अन गरिसके पछि चालु परिक्षणको क्रममा हाइड्रोलिक मोटरको सञ्चालनमा ध्यान दिन आवश्यक छ र यो घडीको दिशामा घुम्ने अवस्थामा छ भनेर निश्चित गर्नुपर्दछ। थप रूपमा, चिसो पानी पम्प पनि एक धेरै महत्त्वपूर्ण घटक हो। यदि शीतलक उल्टो छ भने शीतलक बाहिर आउँदैन, वा यो एकदम थोरै बाहिर आउँदछ। मुख्य मोटर बेवास्ता गर्न सकिन्छ। यो workpiece र प्यानलमा बायाँ वा दायाँ घुमाउन रोलिंग मोल्डको चयन स्विचको आधारमा निर्धारित गरिन्छ। यदि चरण अनुक्रम गलत छ भने, केवल पावर कर्ड खाली छोड्नुहोस्। केवल पावर कर्डमा दुई अनियमित चरण लाइनहरू स्विच गर्नुहोस्।
थ्रेड रोलि machine मेशीन स्थापना गर्दा सावधानहरू The थ्रेड रोलि machine मेसिनको चिसो रोलि process प्रक्रिया वर्तमानमा थप […]